रिजुम सुझावहरू: यी पालना 10 सुझाव ठूलो रिजुम बनाउन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
तपाईं राम्रो काम प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं एक ठूलो रिजुम आवश्यक. जान्नका लागि यो भिडियो हेर्नुहोस् 10 ठूलो रिजुम लागि सुझावहरू.
सामान्य रिजुम सुझावहरू: ठूलो रिजुम बनाउन यी दस सुझाव पालना.
एक रिजुम के हो?
यो तपाईं आफ्नो सम्पर्क जानकारी विवरण सिर्जना गर्न कागजात छ, तपाईंले चाहेको काम, आफ्नो योग्यता, कार्य अनुभव, शैक्षिक पृष्ठभूमि र अन्य जानकारी स्थिति लागि योग्य छन् किन भन्न.
आफ्नो रिजुम पहिलो कुरा तिनीहरूले काम गर्नु साक्षात्कार वा तिनीहरूको कम्पनी मा काम गर्न राखने विचार गर्न चाहनुहुन्छ भने एक कम्पनी जब उनि निर्णय देखो हुनेछ. कम्पनीहरु रिजुमेहरू सयौं प्राप्त. जब आफ्नो रिजुम मा कसैले देखिन्छ, तपाईँले छ 10 व्यक्तिको प्रभावित सेकेन्ड. को कर्मचारी आफ्नो सहकर्मीहरू तपाईं सिक्न चाहन्छ र त्यो सम्झना. बनाउन शब्द प्रयोग गर्न निश्चित “म”, भन्दा “हामी”. तपाईं आफैलाई बारेमा कुरा गर्न प्रयोग हुन सक्छ. तर, यो काम खोज प्रक्रिया अमेरिका को एक महत्वपूर्ण भाग हो.
धेरै शरणार्थी र आप्रवासी ठूलो अनुभव र सीप छ तर राम्रो रिजुम आवश्यक.
ठूलो रिजुम बनाउन को लागि दस सुझाव
यहाँ छन् 10 कुरा तपाईं "राम्रो" थाक मा बनाउन आफ्नो रिजुम जान्छ निश्चित मदत गर्न सक्नुहुन्छ.
1. तपाईंको नाम तपाईंको रिजुम शीर्ष भाग धेरै महत्त्वपूर्ण छ!
निश्चित यसलाई पढ्न सजिलो छ. बोल्ड तपाईंको नाम र सजिलो छ कि आफ्नो नाम को एक छोटो संस्करण प्रयोग हाकिमहरूले पढ्न को लागि विचार. तपाईंको बीचको नाम समावेश गर्छन्, विशेष गरी यदि यो लामो छ.
2. पक्का एउटा "अमेरिकी" फोन नम्बर र इमेल ठेगाना प्रयोग बनाउन.
कहिलेकाहीं, शरणार्थी वा आप्रवासी एक WhatsApp नम्बर वा अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर प्रयोग. एक एशिया | प्रयोग. फोन नम्बर र यो एशिया | मा मानक ढाँचा प्रयोग लेख्न. जो यस जस्तै जान्छ- कोष्ठकमा क्षेत्र कोड, पहिलो तीन संख्या, त्यसपछि ड्यास, त्यसपछि अर्को चार नम्बर:
एउटा सजिलो पुनः प्रकार प्रयोग, अमेरिकी इमेल ठेगाना. एउटा इमेल ठेगाना जस्तै विदेश मा कि समाप्त प्रयोग नगर्नुहोस्: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr सट्टा, एशिया | टाइप गर्न सजिलो प्रयोग. इ - मेल ठेगाना. जस्तै: mo.ali@gmail.com. र यो इमेल ठेगाना जाँच गर्न सम्झना! एक राम्रो विचार एउटा इमेल ठेगाना भनेर सबै काम अनुप्रयोगहरूका लागि प्रयोग गर्नुहोस् गर्न छ.
3. चाँडै समीक्षा गर्न सजिलो छ कि एक लेआउट प्रयोग.
यो निश्चित सबै बनाउन बुझ्न सजिलो छ मतलब. के तपाईं पक्का सबै रेखाहरू अप हरेक क्षेत्रको लागि नै ढाँचा प्रयोग र गरेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा निःशुल्क रिजुम टेम्पलेट डाउनलोड गर्न सक्छन् (लिंक थप्न).
4. को रिजुम माथि आफ्नो अमेरिकी आधारित काम वा स्वयंसेवक अनुभव राख्न.
यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा काम बाट अनुभव समावेश गर्न महत्त्वपूर्ण. तपाईं कुनै पनि एशिया | छैन भने. कार्य अनुभव, विचार स्वयं वा एशिया | मा interning. कम्पनी एशिया | प्राप्त गर्न. अनुभव. तपाईं पनि अर्डर आफ्नो योग्यता बढाउन निःशुल्क अनलाइन कक्षाहरू लिन र आफ्नो रिजुम यी समावेश गर्न सक्नुहुन्छ.
5. आफ्नो भाषा कौशल समावेश तर अंग्रेजी समावेश छैन
तपाईंले बोल्ने कुनै भाषा सूची, तपाईं मात्र बोल्न वा ती भाषामा लेख्न भने सहित. तर, अंग्रेजी समावेश छैन. तपाईं उचित व्याकरण असल रिजुम गरेर तपाईं अंग्रेजी पोख्त छन् देखाउन, पूँजीकरण, र ढाँचा.
6. तपाईंको स्वयंसेवक अनुभव समावेश गर्ने पक्का हुन.
धेरै शरणार्थी र आप्रवासी धेरै तरिका समावेश छैन तिनीहरूले समुदाय मदत. जस्तै, हामीलाई थाहा छ धेरै शरणार्थी अन्य समुदाय सदस्यहरु लागि अनुवाद गर्नेछ. तिनीहरूले यो सिर्फ दयालु हुन के र यो आफ्नो समुदाय को भाग हो किनभने. तपाईं आफ्नो रिजुम मा स्वयं यस प्रकारको समावेश गर्नुपर्छ. तपाईं आफ्नो परिवारलाई मदत गर्दा मात्र कुरा तपाईं समावेश गर्नुपर्छ छ.
7. क्यापिटल र क्रिया प्रयोग
capitalizations संग धेरै सावधान रहनुहोस्. के तपाईं सबै उचित nouns क्यापिटलाइज निश्चित गर्न आवश्यक. उचित nouns नाम जस्तै शब्दहरू हुन्, शहर, र कम्पनीहरु. आफ्नो रिजुम समीक्षा र तपाईं सबै नामहरू लागि राजधानी अक्षरहरू प्रयोग गर्दै निश्चित, स्थानहरू, कम्पनीहरु. तपाईं आफ्नो अनुभव वर्णन लेख्न हरेक बुलेट एक क्रिया सुरु गर्नुपर्छ (कार्य वर्णन गर्न शब्द). यो पढ्न थप रोचक बनाउँछ. यो पनि के आफ्नो जिम्मेवारी तुरुन्तै थिए कर्मचारी बताउँछ.
8. बनाउन आफ्नो रिजुम कुनै दुई भन्दा बढी पृष्ठहरू छ पक्का
आफ्नो रिजुम मात्र एकल अनुच्छेद दूरी हुनुपर्छ र एक वा दुई पृष्ठहरूमा सबै फिट हुनुपर्छ. हाकिमहरूले भन्दा अब हो कि रिजुमेहरू पढ्न हुनेछ.
9. अन्तमा, बनाउन आफ्नो फन्ट सम्पूर्ण रिजुम लागि नै हो पक्का.
तपाईं यसलाई आफ्नो रिजुम मा सबै पाठ निश्चित हुन सक्छन् एक सानो तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नै फन्ट छ. धेरै पटक, जब तपाईं रिजुम गर्दै, तपाईं अर्को कागजात आफ्नो पाठ को भागहरु प्रतिलिपि विशेष गरी यदि, फन्ट गल्ति परिवर्तन हुन सक्छ. यो हेर्न गर्न भ्रामक बनाउँछ. गर्न आफ्नो फन्ट नै छ पक्का, प्रकार "Ctrl +". एक पटक फन्ट को सबै प्रकाश पारिएको छ, फन्ट र आकार चयन. दुई राम्रो, साधारण फन्टहरू छन् प्रयोग गर्न: टाइम्स न्यू रोमन र एरियल. कम्तिमा आकार प्रयोग 12 आफ्नो रिजुम पढ्न सजिलो बनाउन फन्ट.
10. PDF को रूपमा आफ्नो रिजुम सुरक्षित!
तपाईं एक शब्द कागजात वा कागजातको अन्य प्रकार आफ्नो रिजुम सुरक्षित भने, यो भद्रगोल प्राप्त हुन सक्छ. यो तपाईं चाहनुहुन्छ ठ्याक्कै बाटो हेर्न हुनेछ भनेर एक PDF फाइल रूपमा बचत गर्न राम्रो छ. पनि, बनाउन तपाईंले साथै शब्द ढाँचामा सुरक्षित संस्करण छ भनेर पक्का. तपाईं आफ्नो रिजुम गर्न सम्पादन गर्न यो संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रवेश स्तर भूमिकाको लागि थप सुझावहरू
शिक्षा तपाईंले एक योग्य कामदार जस्तो बनाउन मदत गर्न सक्छ. तपाईं के तपाईं आफ्नो काम मा प्रयोग गर्नेछ कौशल विकसित जहाँ स्कूलमा पाठ्यक्रम लिएको हुन सक्छ. यदि यति, आफ्नो शिक्षा मा पाठ्यक्रम को नाम लेख्न. तपाईं अब अनुसन्धान कागजात वा महत्वपूर्ण परियोजनाहरु त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ.
जीवन अनुभव साथै सूची उपयोगी हुन सक्छ. वा आफ्नो घर वरिपरि तपाईं काम गर्नुभयो भने पनि, तपाईं के कौशल तपाईंले प्रयोग सूची सक्नुहुन्छ. जस्तै, केही रहन-मा-घर आमा तिनीहरूले परिवार बजेट सन्तुलित भन्न सक्छ.
धेरै राख्दै जोगिन “नरम सीप” आफ्नो रिजुम मा. यो तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व लक्षण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हो. सट्टा, आफूले सिकेका तपाईं गरे कुराहरू वा कौशल ध्यान. तपाईंले यसलाई पटक एक जोडी तर त्यो भन्दा अधिक गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै, तपाईं भन्दै जोगिन “मैत्री”, वा “आनन्दित व्यक्ति”.
आफ्नो अनुभवको आधारमा, आफ्नो रिजुम आफूलाई शीर्षक दिन. जस्तै, तपाईं एक स्कूलमा काम यदि तपाईं को हेरविचार र जवान छोराछोरीलाई सिकाउनुभयो जहाँ, तपाईं एक हुनेछ “शिक्षक” वा “बाल्यकाल शिक्षा व्यावसायिक”.
व्यावसायिक भूमिकाको लागि थप सुझावहरू
आफ्नो रिजुम भन्दा लामो हुनु हुँदैन2पृष्ठ, पनि यदि तपाईं एक लामो समय को लागि काम गरिएको छ. पछिल्लो मात्र समावेश 15 आफ्नो काम अनुभव वर्ष.
तपाईं प्रसिद्ध वा हार्ड मा प्राप्त थियो कि एक स्कूल गए भने, बनाउन भनेर थप्न पक्का आफ्नो “शिक्षा” खण्ड.
सूची उपलब्धिहरूलाई साथै के आफ्नो कार्यहरू थिए. तपाईं एक प्रभावशाली परियोजना मा काम भने, यसको बारेमा एक सानो विवरण दिन. एउटा उदाहरण हुनेछ तपाईं मा काम एक परियोजना धेरै महंगा थियो वा जहाँ तपाईं धेरै मानिसहरू व्यवस्थापन गर्न थियो.
यहाँ एक रिजुम टेम्पलेट तपाईं आफ्नो रिजुम सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
यहाँ केही उदाहरण रिजुमेहरू छन्:
भुटानी महिला फेरि सुरु उदाहरण
करेन पुरुष फेरि सुरु उदाहरण
सोमाली महिला फेरि सुरु उदाहरण
रिजुम अनुकूलन: काम-विशेष रिजुम कसरी बनाउन
कम्पनीहरु रिजुम ट्रयाकिङ सिस्टम काम आवेदन फिल्टर प्रयोग. सबै भन्दा जब लागि, मानव आफ्नो रिजुम पढेर छैन. MostInstead, कम्प्युटरमा हेर्न आफ्नो रिजुम मा शब्द मेल यदि काम विवरण देख छ. एक पोस्ट काम सामान्यतया आवेदन सयौं प्राप्त.
आफ्नो रिजुम कम्प्युटरमा समीक्षा छ देखि, तपाईं एक काम विशेष रिजुम सिर्जना निश्चित छ. यो प्रत्येक समय तपाईं लागू अर्थ, तपाईं काम विवरण जाँच र यसलाई आफ्नो रिजुम मेल गर्न आवश्यक. तर, काम विशिष्ट रिजुम काम विवरण देखि हरेक शब्द समावेश गर्न छैन. किवर्ड खोज्न. किवर्ड सबैभन्दा अक्सर प्रयोग गरिन्छ कि शब्द र वाक्यांश छन्. धेरै कीवर्ड अन्तर्गत सूचीबद्ध “आवश्यक सीप” खण्ड. जस्तै, यदि तपाईंले प्रशासनिक सहायक हुन लागू गर्दै, तपाईं जस्तो शब्द याद “दाखिला”, “भेटघाट बनाउने”, र “निर्धारण” धेरै प्रयोग.
काम विशिष्ट रिजुम लेखन एक धेरै समान अर्थ अन्य शब्दहरू शब्द परिवर्तन समावेश हुन सक्छ. जस्तै, तपाईं एक "सामग्री लेखक" तपाईँ पहिले एक रूपमा काम गरेको छ जब चाहन्छ कि काम को लागि लागू हुन सक्छ "सामग्री निर्माता।" अर्को उदाहरण वाक्यांश परिवर्तन हुन सक्छ “नयाँ कार्यकर्ता लागि देख्यो” गर्न “recruited कर्मचारीहरु”.
यो प्रक्रिया समय र अभ्यास लिन्छ. सुरु गर्न सजिलो तरिका बाहिर छाप्न काम वर्णन छ. लिन केही समय र हाइलाइट र महत्त्वपूर्ण छन् लाग्छ शब्दहरू रेखांकन र तिनीहरूलाई आफ्नो रिजुम मा थप्न निश्चित. इमानदारी महत्त्वपूर्ण छ भनेर सम्झना. तपाईं संग exprience छैन कि कुनै पनि कौशल समावेश छैन. यो प्रक्रिया को लागि एक सहयोगी वेबसाइट भनिन्छ jobscan.co. तपाईं आफ्नो रिजुम र काम विवरण अपलोड र पर्याप्त मिलान छन् वा थप गर्न आवश्यक भएमा देख्न सक्नुहुन्छ.
हामी आशा यी रिजुम सुझाव तपाईं मदत. अब तपाईं एउटा ठूलो रिजुम कसरी बनाउने सिकेका कि, यसलाई आफ्नो काम साक्षात्कार लागि तयार गर्न समय छ.
ठूलो काम साक्षात्कार कसरी सिक्न.